3-in-1 EMS slimming decice, China 3-in-1 EMS slimming decice Manufacturers, Suppliers, Factory - Fisherman
>lọ>PRODUCTS>Slimming & Ihu ihu ihu Ngwaọrụ
3-in-1 EMS ahụ na-edozi ahụ
1. Jiri Ultrasonic Sonic (ultrasound) rụọ ọrụ sel anụ ahụ, kwalite mgbasa na-adịghị mma nke ọbara na lymph, na-akpali anụ ahụ, ma na-eme ka ihe nzuzo na-eme n'ime akpụkpọ ahụ. Malite nlekọta site na akwa oyi akwa miri emi. Ọ nwere ike melite wrinkles, stains, acne, sagging na nsogbu akpụkpọ anụ ndị ọzọ.
2. EMS obere oge: ime ka hammering mmadụ, ịhịa aka n'ahụ, ikpuchi, ịdụnye anụ ahụ na ịmịkọta, na-eji micro-current massage. Na ọnọdụ a, ụdọ nke ugbu a na-akpali akwara iji mee ka ha na-agagharị. Omume ahụ ga-eri abụba, shuga na carbohydrates na anụ ahụ gbara ya gburugburu. N'oge mmega ahụ nkịtị, mọzụlụ na-eri ihe dị ka 60-70 joules nke ike kwa nkeji, mana akwara nke na-emega ahụ na mgbatị dị elu nwere ike iru 3000-4000 joules kwa nkeji, ka e wee nweta nsonaazụ nke slimming.
3. Igwe ụzarị ọkụ: The carbon fiber bundle around the probe emit 12-micron wave-band far-infrared light, nke nwere ike banye n’ime n’ime anụ ahụ, mee ka mgbasa ọbara na-aga ngwa ngwa, mee ka anụ ahụ dịkwuo mkpa, mee ka mkpụrụ ndụ rụọ ọrụ, ma mee ka metabolism dị ike.
ihe onwunwe ABS + 304 igwe anaghị agba nchara nyocha
Product size (unit:mm ) 195 * 80 * 54mm
Product ibu / ibe 181g
Nha igbe (nkeji: mm) 160 * 67 * 220mm
Ibu ibu (igbe + ngwaahịa) 421.2g
ngwugwu igbe + ọnya + akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ ngwa ngwa Electrode mpempe akwụkwọ * 4, electrode waya * 1
Ibu / katọn 30PCS
Nha katọn (unit: mm) 50 * 46 * 35.7CM
MOQ mba moq
Factory nnyefe ụbọchị 7-14days
Nweta ike (oge nkwụ ụgwọ, oge voltage, jiri oge) Ike: DC I5V 500mA
Ikanam vibration olu lifter
Ihu shaping vibration Warming Massager
Obere RF Cavitation maka Slimming
Ultrasound RF ahụ slimming ngwaọrụ